Kana Windows isingakwanise kubiwa, 40% yevashandisi vangashandisa Linux | Linux Vakapindwa muropa
Kana Windows isingakwanise kubiwa, 40% yevashandisi vangashandisa Linux
Kana Windows isingakwanise kubiwa, Linux ingangove neanoda kusvika makumi mana muzana yemugove wemusika mumatafura. Izvi zvinoratidza ongororo ichangoburwa neUniversity yeOslo
Ongororo ichangoburwa neUniversity yeOslo yakaratidza kuti mugove wevanoshandisa desktop yeLinux zvaizoenda kubva pa2 kusvika ku40% dai paive pasina humbavha muMicrosoft Windows. Iwe une chekutanga chinongedzo chekudzidza mu Iyi link iyo iwe yaunogona kuona kana iwe uchiziva Chirungu.
Ichi chidzidzo chinoratidza izvo vazhinji vedu takafungidzira, humbavha uhu, chimwe chinhu Windows chaakatambura nacho kwemakore, inovabatsira chaizvo, nekuti nekuda kwekuti iwe unogona kuwana ino yekushandisa mahara, vashoma vanhu vanoshandisa Linux.
Kana iwe ukatarisa zvakanyanya uye wakashandisa Microsoft's system kwemakore, iwe unogona kuona kuti hazvina basa zvakanyanya kuti uve neyekutanga vhezheni yeanoshanda system kana pirated vhezheni, nekuti uchishandisa pirate zvinokonzeresa senge Kmspico uye nekudhaunirodha zvidzoreso zvaunoda nemaoko, unogona kuva nerezinesi rakafanana kune rekutanga mune zvese zvese.
Nhau dzakaipa ndedzekuti kuchine vazhinji vashandisi vari kutya shanduko, avo vanosarudza kuramba vachishandisa pirated Windows kuyedza Yemahara, epamutemo uye emahara Linux anoshanda sisitimu. Kunyangwe chiri chokwadi kuti mashandiro akaita seLinux Mint akaita basa rakakura maererano nekujairana uye kuchinjika kune mushandisi mutsva, kuchine vanhu vanotya kuchinjira kuLinux.
Uye zvakare, nhasi mutemo waMicrosoft wachinja, izvo Ivo vaenda kubva kukuchaja 100 euros yeWindows XP kukupa iwe Windows 10, chimwe chinhu chinoitika kunyangwe kopi yako yeW7 kana W8 iri pirate. Zvisinei, sezvatakaona mu chinyorwa ichi nezve Windows 10, zvese zvine mutengo uye vashandisi vazhinji vanokoshesa kwavo kuvanzika havadi kukwidziridzira ku Windows 10, vachisarudza pirated vhezheni yacho
Mune mawonero angu, iwe unofanirwa kutanga kudzidzisa vanhu kushandisa nekukoshesa Linux, nekuti kunyangwe kana pirated Windows inotsiva iyo yepakutanga chaizvo, zvinogara zvine njodzi kuve nehurongwa husina kutsigirwa, chimwe chinhu chisingaitike neLinux, maunogara uine rutsigiro rwemahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Kana Windows isingakwanise kubiwa, 40% yevashandisi vangashandisa Linux
Carlos Senero akadaro
Pindura Carlos Señor
Kare. Uye dai ambuya vangu vaive nemavhiri ingadai yakava bhasikoro uye sekuru vangu vangadai vakachengetedza mari yakawanda kumatikiti epasi pevhu. Kana windows yaisatsemurwa, yega yega yaizochengeta mahwindo aiuya akaiswa-mberi pacomputer yavakatenga. Microsoft yaizodzikisa mitengo kuti ive yemahara kana yemahara zvachose. Mari hombe yeMicrosoft inouya kubva pre-yakaiswa windows uye zvakasikwa zvakakomberedza OS yayo. Vamwe vese vari kufungidzira pamusoro pekufungidzira kwakafanana kuyunivhesiti. Uye kana akanaka uye akapfuma akafa, ndingadai ndave nerombo rakanaka nevakadzi ... chokwadi ... sekunge ndaizviona ... zvakanaka ...
Chinhu pamusoro pe-pre-yakaiswa Windows ichokwadi… Vanhu vanofunga kuti mahara, vasingazive kuti mutengo wekomputa unodhura kana usina rezinesi reWindows. Ikozvino Microsoft yachinja mutemo wayo, rimwe zuva ndakaisa pirated Windows 7 palaptop yandakatenga uye ndisina kuibaya kana kuimisikidza, Windows iri kundipa kuti ndichinjire kuWindows 10 mahara, paWindows yepirati.
Zvinotaridza kuti pane mari yakawanda inogadzirwa yekutengesa data pane marezinesi.
»Piracy, chimwe chinhu Windows chakarwa kwemakore»
Zvinotaridza kuti Microsoft icharwa nehuipi hweiyo yayo OS? Zvese zvavanotarisira nezvazvo kuita madhiri emapoka ese kuti vatize nehurongwa hwavo, asi mushure meizvozvo handina kumbonzwa chero chiito chaicho pakurwisa hupombwe.
Pamwe hazvina kutaurwa ipapo. " Ini ndoda kuti ivo vaine pirate kuhwina kune ivo vane imwe OS »?
"Nhau dzakaipa ndedzekuti kuchine vashandisi vazhinji vari kutya shanduko"
Vashandisi vanotya shanduko? havazove vashandisi vasingafarire shanduko?
Kana ivo vakagarika neiyo yavo yekutanga kana pirated OS, nei vaizotya? Vanofanira kutya masisitimu akavharika kusagadzikana, kana kusatsigirwa kana vangave vapambi, asi ivo havatye izvozvo.
Iwe hausi kufarira linux kusvikira iwe waguta nekukunda, asi chero bedzi vachinzwa kugadzikana havazofarire linux
"Dzidzisa vanhu kushandisa nekukoshesa Linux"
Dzidzisa kukoshesa linux?
Hongu vanotya shamwari itsva. Ndiri kuona vanhu vachinyunyuta nezvekuti Windows yakaipa sei, kuti inopunzika, kuti inodhura uye zvakadaro havasvetuke nezvikonzero zvakaita sekuti "Handizive mashandisiro eLinux", "zvakaoma kwazvo", "zviri nani kuzivikanwa zvakaipa … ».
Uye ini ndinozviti kukoshesa Linux nekuti chaizvo yemahara software chinhu chakakura kwazvo, chimwe chinhu chatinacho mahara nekuda kwekuda kwevanhu vazhinji. Semaonero angu, zvese izvi zvinofanirwa kukosheswa uye kukosheswa nenzira yakafanira kwazvo.
Ini ndinotenda mune yangu yekuzvininipisa maonero ekuti vanhu vanogarira windows nekuti kune kwakawanda kushambadza uye zvirongwa zvakanangana neiyo OS nharaunda. Vazhinji vavo vanogara nemahwindo uye kwete ne linux, kwete nekuti havazvizive, asi nekuda kwekutya kunopihwa nokusvetuka uku, vanhuwo zvavo vanoenda kune zvakapusa uye nezvavanoziva. Mukururamisira zvinofanirwawo kutaurwa kuti maOS ese ane simba nekushaya simba.Ndinofunga kuti zvakanakisa kusiyanisa uye kutora mukana kune masimba ane ese maWindows neLinux.
Zvirinani kuzivikanwa zvakaipa ... Ndozvinotaurwa nevanhu. Ini ndinoshandisa zvese zviri zviviri (Windows kazhinji nguva dzose kutamba mitambo), asi ini ndiri zvakawanda zveLinux zviri pachena.
Leonard Mora akadaro
fatan mitambo + uye zvimwe mmorpg ye linux
Pindura kuna Leonardo Mora
azpe zvinoenderana nemaapplication emahara anodarika edhisheni dzeshanduro mumawindows ndoda undiudze 5 uye nei uchitenda
Nzira dzekuwedzera kushandiswa kweLinux, tsvaga niches, iyo yasara ichaguma. Kusimbisa hukama neSteam uye nekukurumidza kuburitswa kweLinux-based Steam OS uye kupa linux muhurumende nemabhizinesi masisitimu. Zvimwe zvese zvichauya nenguva.
Ini ndinofungidzira zvakanyanya, kuhwina kwakakwenenzverwa kwakaenzana neyakagadziriswa nematurusi aripo padandemutande, izvozvi zvakanaka uye kwandiri ndakatenga marezinesi gumi pa10 euros kubva kunzvimbo dzepamutemo uye marezinesi ari pamutemo uye anozivikanwa ne mocosof kana gnu yakundikana padesktop iri, mumaonero angu, kupihwa kwedhemasi kweOS vari vanhu vevanhu vevanhu zvisingaite kumhanyisa chirongwa chemawindows pa10, kushandiswa kwakanyanya kweiyo terminal (uye kuti munzvimbo zhinji kune zvakakosha raira asi ivo kashoma kushanda) uye sezvaungaona muYT pari zvino paine distro iyo iri chaiyo kopi ye windows nekucheka kwayo, hongu, asi nei tichida windows vanhu kana tichida kuona chimwe chinhu chitsva, kana uchinzwisisa kuti hauchazofaniri kuronga kugoverwa kutsva uye kana huwandu hukuru hwekushandisa hwakaenzana kana hukuru kune hwokukunda ipapo chete ndipo pandinozowedzerwa quota yeGNU pa desktop
LVM: Unganidza akaomarara madhiraivha sekunge aingova one chete
Nhanganyaya kune squid: Nhanho-nhanho Setup